Ra-Tin « Kopi-kole Rossy 2019 »: Noraisina ho mpiasan'ny Faritra Matsiatra Ambony
lundi, 06 janvier 2020 15:35
Noraisina hiasa ao amin'ny Biraon'ny Faritra nanomboka androany 6 janoary 2020 i Ra-Tin « Kopi-kole Rossy 2019 ».
Fampanantenana nataon-dRazafindrafito Lova Paupil, Goverinoran'ny Faritra Matsiatra Ambony ny « hanomezana asa maharitra azy mba hahafahany mifantoka bebe kokoa amin'ny tontolon'ny Mozika sy ho tantsoroka ho azy eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha raim-pianakaviana azy », hoy ny fampitam-baovao nataon’ny Faritra.
Rakotonirina Augustin no tena anarany. Ra-Tin no fiantso sy nahafantaran'ny maro azy nandritra ny fifaninanana. Nanohana be an-dRa-Tin na tamin’ny fihirana, fiantsehatra, eny ara-pitaovana zavamaneno (angorodao sy gitara) i Rossy. Nankasitra ny zava-bitan’i Ra-Tin sy ny firaisankinan'i Fianarantsoa nanohana azy ihany koa ny Governoran’i Matsiatra Ambony tamin'izao fandresena azony izao.